Dowladda DF-ka Oo Lagu Cadaadinayo in Ay lasafato isbaheysiga Sacuudiga.
Tuesday September 26, 2017 - 19:03:23 in Wararka by Super Admin
Hoggaamiyaha dowladda Federaalka iyo wafi uu hoggaaminayo ayaa markale safar ku aaddan dalka Sacuudiga xilli khilaafka u dhaxeeya dowladaha Khaliijka uu meeshii ugu xumeed gaaray.
Farmaajo oo ay wehliyaan tiro wasiirra ah oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Garaad ayaa gaaray magaalada Riyadh halkaas oo ay kulamo kula qaadan doonaan madaxda ugu sarraysa Boqortooyada Sacuudiga.
Cabdi Raxmaan Yariisoow oo ku magacaaban wasiirka warfaafinta ayaa warbaahinta u sheegay in socdaalka Farmaajo uu salka ku haayo dhameystirka ballamo sacuudigu horay ugu qaaday DF-ka sida maalgashi iyo taageero lacageed.
DF-ka waxay sheegaysaa in safarka Farmaajo uu yimid kadib casuumaad uu helay Max’med Bin Salmaan Dhaxal sugaha boqortooya iyo Boqor Salmaan, warar laysla dhaxmarayo waxay sheegayaan in Sacuudigu uu Farmaajo ku cadaadinayo in ay xiriirka ujarto dowladda Qadar ayna lasafato isbahaysiga imaaraatka ee Afarta dowladood ka kooban.
Dhammaan maamul goboleedya kajira dalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in ay xiriirkii ujareen dowladda Qadar ayna taageersanyihiin imaaraatka Carabta iyo Sacuudiga, lama saadaalin karo mowqifka rasmiga ah ee Villa Somalia ay ka qaadan karto ismariwaaga dowladaha Khaliijka balse waxaa dhici karta in lacago malaayiin dollar ah lasiiyo oo lagu cadaadiyo jaridda xiriirka Dooxa.